Tilmaamayaasha 2.0 waxay soocelinaysaa WordPress Theming iyo Ecommerce | Martech Zone
Khamiista, Diseembar 8, 2011 Douglas Karr
WordPress waxay sii waday inay qabato shaqo fantastik ah… maahan oo keliya cusbooneysiinta barnaamijkooda laakiin sida ay runti ugu fureen is dhexgalka dhinac saddexaad. Plugins iyo Mawduucyada loogu talagalay madalku waa meel walba, waana kuwo aad u jaban. Ganacsiyo cusub ayaa ku soo kordhay hareeraha madal sidoo kale, Tilmaamaha ka mid ahaanshahooda! Shirkaddu aad ayey ugu faraxsan tahay inay ku dhawaaqdo bilaabista Pagelines 2.0, oo ah qaab mawduuc oo beddelaya WordPress.
Badeecadaha 2.0 waxay ku faantaa astaamaha soo socda:
Jiid & Hoos u Dhac Midig - Ugu dambeyntii! Madal jiid-iyo-dhibic ah oo kuu oggolaanaysa inaad ku dhisto degel hab xirfad leh. Qaab-dhismeedka ugu horreeya abid oo leh "qaybo" jiidis ah oo xirfad-naqshadeynta websaydhka ah.
Design Tixgelinta - Qaabka PageLines wuxuu si firfircoon uga jawaabi doonaa xallinta biraawsarkaaga ama qalabkaaga.
Xakamaynta Layout - Kaliya jiid oo hoos u dhig si aad u dejiso cabbirka qaabeynta waxyaabahaaga. Ka dib dooro mid kasta oo ka mid ah xulashadaada 5 ee qaabeynta qaab-bog-bog.
Dharka Qaybta - Qaybaha nuqul si aad ugu isticmaali kartid dhowr jeer isla bogga. Qayb kastaa waxay heshaa ikhtiyaarro u gaar ah oo si madaxbannaan ayaa loo xakameeyaa.
farshaxan - Ka xulo in ka badan 50 farriimaha websaydhka iyo Google. Gabi ahaanba u beddel muuqaalka qaab-qorista websaydhkaaga ilbidhiqsiyo gudahood.
Maareynta Bogga Gaarka ah - Hadda waxaad haysataa tanno xakameyn ah nooc kasta oo bog ah. Gudaha 2.0 waxay soo bandhigayaan Bogag Gaarka ah oo kaa caawinaya inaad xakameyso bogagga sida qaybaha, iyo kaydka.
Xakamaynta Midabka - Isticmaal xakamaynta midabka si aad ugu beddesho jadwalka boggaaga ilbiriqsiyo gudahood. Waxaad sidoo kale beddeli kartaa qaababka qaabka oo aad ku dari kartaa sawirrada asalka ah.
Badeecadaha 2.0 sidoo kale waxay taageertaa kudar si loogu daro barnaamijkooda ecommerce. Tani waa xirmo xirmo ecommerce isku dhafan oo aan arkay (WooCommerce kan kale).
Waxa ugu fiican, Tilmaamaha sidoo kale wuxuu leeyahay koox taageero macaamiil ah, goleyaal isticmaale iyo 30 Maalmood oo lacag celin ah. Waxaan nahay taageereyaal waa weyn (iyo kuwa gacansaar la leh) Pagelines, iyagoo wax ka qoray waxyaalahooda cajiibka ah jiido & hoos u dhig WordPress madal ka hor.
Tags: themewordpress jiid iyo dhibicecommerce eray ganacsidukaanka wordpresstheme wordsameynta wordpress
22, 2011 at 7: 38 PM
Ilaa hadda barnaamijka ugu horumarsan ee WordPress, waxaan si xoog leh ugu soo jeedinayaa Bogagga dhammaan macaamiishayda. Iyo 2.0 waxay samaysay dhisida degello internet oo waaweyn oo leh WordPress xitaa xiiso badan! Jacaylka wax soo saarka iyo taageerada!
22, 2011 at 9: 19 PM
Waan ku raacsanahay - waxaan kaliya dhignay mawduuceena koowaad ee macmiil waana jeclahay!